Kambani Tsika & Nhoroondo - Quanzhou Jinjia Machinery Co., Ltd.
Mhepo Mafungu Anotungamira Mberi Kwese Kunokwikwidza
Madiki uye epakati mabhizinesi, mumasaisai achirwa, vanhu veHongda vanotora hunhu hwekuita, danho rakasimba, vachipfuura Quanzhou huchenjeri hwekare mune hunhu hwetarenda rakanaka kune hunyanzvi tekinoroji, kududzira zvakare kwe "Hapana kukunda" kweMweya.
Tatarisana nematambudziko matsva uye nzendo nyowani, nemweya wehunyanzvi uye kushanda nesimba, tichaisa ngarava yekukunda mumusika wezvikamu zvepasi nepasi zvemuchina wekuvaka uye toenderera kumberi neushingi.
Harvard Bhizinesi Bhizinesi purofesa achitaura, munguva yakapfuura kuona kushanda kwekambani kungoona bhuku chete, uye ikozvino zvakanyanya kutsika yekambani uye kubatana kwemakambani emakambani, inova ndiyo kiyi yekambani kusimudzira kwakasimba. Enterprise budiriro, zvebhizinesi tsika chinhu chinodiwa chinodiwa kune imwe nhanho, makwikwi emabhizinesi azvino uno ndeemumwe wemakwikwi, asi vanhu vanovimba netsika yekubatana, da da kambani yakavakirwa pakatenderedzwa tsika, kusimudzira mweya weHongda, kuumba bhizinesi rakanaka rinowirirana. nharaunda mukati mebhizinesi mukugadzira yakanaka, inofambira mberi, kushanda nesimba uye mhepo, zvichibva pane zvavo, kuti vaite mabasa avo.
Enterprise mweya: kutenda kwakanaka. * Yakatsaurirwa ruzivo ruzivo
Bhizinesi uzivi: mutengi, musika
Pfungwa yekutengesa: kugadzira kudiwa uye kushandira nharaunda
Tsvaga iyo Quanzhou Minzheng Yekutakura Machining Plant
Wawana Quanzhou Hongda Machinery Co., Ltd.
Zvigadzirwa zveKambani Zvakapinda muMukati Musika weinjiniya Muchina
Zvigadzirwa zveKambani Zvakapinda muSoutheast Asia Musika weinjiniya Machinine
Zvigadzirwa zveKambani Zvakapinda muEurope Musika weinjiniya Machinine
Wana Zita reKusimbisa Bhizinesi
iyo Kambani Yakavhura Subsidiary Fujian Jia Machinery Co, Ltd.
Yakawanikwa Kutengesa Kambani Quanzhou Jinjia Machinery Co., Ltd.
Yakawanikwa Lianhe Heavy Viwanda Co, Ltd.